Inani le-fan ku-feng shui
Umculi uvele isikhathi eside kakhulu. Kwamanye amazwe (isibonelo, e-China), futhi kuze kube yilolu suku alulahlekelwa ukuthandwa kwalo. Ngaphezu kwalokho, kungabonakala ezandleni zabesifazane kuphela, abalandeli nabo basebenzise ngokuqinile amadoda. Ngendlela, i-fan e-China ayiyona nje imicibisholo kodwa ayiyona into ekhethekile, kodwa ithuluzi elikhethekile elisiza ukuzivikela nabathandekayo kubantu abanamandla amabi. Ngakho-ke, othisha baseShayina bathi lo fan ungumhlobo wesikrini lapho amandla e-Qi angenakukwazi ukungena khona.
Ngokuqondene ne-feng shui, kule mfundiso u-fan unamathele kakhulu. I-fan ibhekwa njengenye yezinkolelo ezinhle kakhulu. Ngakho-ke, uma uhlobisa indlu ngomoya, uzoletha indlu amandla.
Umshayeli uyisidalwa sokuphila okuphakade. Ngokomlando, uZhong Lioyan (kwakuyizikhathi zakudala waseChina) angabavusa abafileyo nge fan. Futhi lo fan wathandwa kangaka ngoba kuyimpawu ekhukhumezayo.
Ngelinye ilanga, ezinsukwini ezinhle zakudala, lo fan wayebhekwa njengophawu lomphakathi ophakeme. Ngakho-ke, uma uthatha isinqumo sokuhlobisa indlu ngothisha, yibeke endaweni ephethe inkazimulo (ohlangothini oluseningizimu). Kuyinto efiselekayo kulokhu ukukhetha umngani, lapho ipeni noma ukhozi izobe iboniswe khona.
Impilo izoqinisa i-fan ezobe iboniswe ngesi-spruce noma emisedari. Kungcono ukufaka umlingisi onjalo ebhodini elisempumalanga. Ukuheha imali, thenga umfana onenhlanzi. Kuhle uma ungathola umfana onenhlanzi.
Ngendlela, abalandeli bangashukumisa izindawo lapho amandla ekhona khona. Isibonelo, unomuzwa wokuthi awunamandla okwanele okwanele endaweni yokuzilibazisa. Hang fan eduze kombhede - futhi isimo sizothuthukisa. Kodwa kunoma yikuphi, ungabeki umshayeli phezu kombhede, ngaphandle kwalokho ubungozi bokuthola ukuleleka.
Uma udinga amandla angaphezulu ehhovisi lakho, faka u-fan wakho ngemuva kwakho. Qaphela ukuthi kufanele ihlale ekhoneni lamadireji angamashumi amane nanhlanu, futhi umshayeli kufanele avuliwe.
Udinga ukwandisa amandla enhle ekamelweni elithile? Kulula kakhulu. Hang the fan odongeni. Isiqondiso saso kufanele sihambelane nesiqondiso segazi elifunayo.
Ngokuqondene nombala fan we-Feng Shui, kungaba noma yikuphi. Ubukhulu bakhethwa ekamelweni elithile. Uma igumbi lincane, lo fan kufanele futhi abe mkhulu kakhulu. Futhi ekamelweni elikhulu iqembu elikhulu lizohamba kahle. Ngokuvamile, fan enkulu (uma efakwe ekamelweni elincane) uyoletha kuphela ukukhathazeka nokuphonsa. I-fan encane ngeke isebenze ekamelweni elikhulu.
Umbala, njengoba ushiwo ngenhla, khetha noma yikuphi. Konke kuncike kunambitha. Into eyinhloko ukuthi umbala okhethiwe owuthandayo, ukuletha injabulo yokuzijabulisa, ukuphumula (uma kudingeka) noma, ngokuphambene nalokho, unike amandla.
Uma ubeka umshayeli obomvu ngqo phambi komnyango wangaphambili, udonsela inhlanhla endlini. Yebo, indawo yobudlelwane ingahlotshiswe nge-fan yegolide. Kuyinto efiselekayo ukuthi iboniswe izibalo eziphambene (amadada, ama-mandarins noma izinja). Noma kunjalo, noma yimuphi omunye ozokwenza. Kulo mkhakha, umshayeli onomfanekiso we-hieroglyph wenjabulo uphelele.
Yenza kusebenze i-amulet
Yenza i-amulet isetshenziswe ngendlela ye-fan elula kakhulu. Umphumela walo uzoqina nakakhulu uma usebenzisa le fan kuya injongo yayo ehlosiwe, okungukuthi, ukuyishisa. Ukuzulazula komunye fan kuzoheha amandla ahle.
Uma usuvele unomshayeli endlini yakho, yenza ukuhlolwa okulula. A poobmahivaytes kancane kubo. Emaminithini ambalwa uzozizwa ukhululekile.
Ngendlela, eChina bathi i-fan is a talisman ku-talisman. Futhi bathi liwuphawu oluwuphawu. Lokhu kungenxa yokuthi e-fan ungabonisa noma iyiphi i-mascot. Isibonelo, i-turtle, udrako, amadada ... Uma kukhona umfana onjalo endlini yakho, uzoletha inzuzo kabili.
Uma ungawutholi umshayeli onesithombe osidingayo, dweba umculi wesibili ngokwakho noma usike bese uwunamathisela. Amandla we-talisman kulezi ngeke abe ngaphansi.
Emagcekeni aseChina, kuthiwa umshayeli uletha emhlabeni unkulunkulukazi onamandla nowesifazane ophethe umoya - Nemesis. Ngolunye usuku wehla esibhakabhakeni waya phansi futhi wabona ukuthi bangaki abantu abahlupheka. Khona-ke inhliziyo yakhe yagcwala isihawu kubantu. Ukuze abasize, wanquma ukubanika umlingo wakhe wemilingo. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, wonke umuntu odinga usizo angathuthukisa umshayeli bese enza kanjalo umoya. Ngakho-ke wayefuna ukucela usizo kunkulunkulukazi womoya uNemiza.
Ochwepheshe be-Feng Shui bazi kancane umlando we-fan. Ngonyaka wesibili we-BC eChina, uMbusi Wu-Wang wabusa. Kuye naye owake wangena kuqala. Yiqiniso, ngaleso sikhathi wayebizwa ngokuthi uhlukile kancane - wavuka. Ngemva kwesikhashana, kubonakala abalandeli abancane - nxazonke, benesibambo eside. Khona-ke laba abalandeli basakaza eJapane.
Ngekhulu le-leshumi, abalandeli be-compact bavele e-China. Ngaleso sikhathi, base basebenzise kokubili njengomhlobiso, futhi njengama-talismans aqinile. Futhi wasungula laba abalandeli eJapane ngekhulu lesikhombisa. Isisekelo se-fan sasinezingcwecwe ezincane, ukusika kusukela etheni noma kusuka ku-tortoise shell. Futhi kwakukhona abalandeli bezinkuni. Amapulangwe ahlangene ndawonye ngephepha, indwangu noma isikhumba. I-silk yayivame ukusetshenziswa kakhulu.
Ngendlela, abaseJapane basabheka ukuthi umshayeli uyisici esiyinhloko sezingubo zabo. Ekuqaleni, abalandeli babesilisa kuphela. Futhi ngisho namasosha azama ukufaka umculi ebhande (eduze kwesikhali). Ngemuva kwalokho, lo fan wasetshenziselwa ukudlulisela izisindo komunye nomunye.
Ekuqaleni kwekhulu leshumi lo fan waba yingxenye yokuphila kwabahlonishwayo. Abalandeli manje basebenziwe nge-bamboo. Izindwangu zezihlahla zazixhunywe ngephepha eliphezulu. Khona-ke u-fan ngamunye wayeqoshwe ngesandla. Ukudweba, kuphela i-mascara esetshenzisiwe.
Ukuze uqiniseke ukuthi lo fan wayengelona nje umqondo olula, kodwa futhi umhlobiso omuhle, wawuvezwe ngezimbali, izilwane, izinyoni, imihlaba. Ngomdwebo ulandele ukubusa kwegolide: yonke imidwebo efolini kufanele ithwale amandla amandla kuphela.
Ngakho-ke, ake sithi. Inani le fan infilosofi ka-Feng Shui likhulu kakhulu - liyi-talisman enamandla kakhulu. Isetshenziswe uma kwenzeka uzizwa ungenamandla okuthola amandla. Ngaphezu kwalokho, kusiza ukubhekana nokucindezeleka kwesimo kanye nokunciphisa amandla.
Ukufa okusheshayo noma iminyaka yokuhlukanisa, okungcono?
Akukhona lokho futhi kuyingozi, le mikhuba emibi
Iyini inhlanzi ye-feng shui?
I-Genie yokusetshenziswa komuntu siqu
Indlela yokwenza ingane ilele isikhathi eside?
Indlela yokondla ingane engaphansi komnyaka ongu-1 ubudala
Iklabishi isaladi nge-cornichons
Isidlo Sokushisa Ngamafutha
Indlela yokwenza uma isikhumba sibheka: ama-secretes angu-4 e-make-up aphelele!
Ungathenga kanjani ithani ekhaya?
I-dessert eyenziwe ekhaya eyenziwa ngemifudo - ama-pancake we-chocolate, zokupheka nesithombe
I-Freesia isitshalo futhi uyayinakekela
Umcwaningi uDmitry Marianov
Umama ucabanga ukuthi isoka lami liluhlaza okwesibhakabhaka
Ukuzivocavoca ukunciphisa ivolumu yezinqulu
Izikhathi zokuphumula ze-Brunch
Indlela yokuhlobisa izipikili zakho kahle?
Isaladi nama-persimmons namantongomane